Qaamuuska kumbuyuutarka (STU) | Ragga Stylish
Qaamuuska Kumbuyuutarka (STU)
Ragga Stylish | | Tiknoolaji
Server: Eeg Server.
Xidigaha Xidigaha Xidigaha Xidigaha Xidigaha Xidigaha: Gudaha Xiddigta Xiddigta ama muuqaalka xiddigta, noodhadhku wuxuu ka soo baxaa xarun. Xarunta ama isku-ururshaantu way ka duwan tahay iyadoo ku xiran tiknoolajiyada loo isticmaalo Ethernet, FDDI, iwm. Faa'iidada ugu weyn ee topology-kan ayaa ah in haddii hal noodh uu guuldareysto, shabakadu way sii shaqeysaa
Beddel ama buundo: Qalab shabakad oo awood u leh inuu qabto hawlo dhowr ah oo maamulka ah, oo ay ku jiraan dib u habeynta xogta.
SDRAM: aad u dhakhso badan, xusuusta awoodda sare ee server-yada iyo xarumaha shaqada.
Semiconductor: Kani waa magaca loo bixiyo walxaha dahaarka leh, sida germanium iyo silikoon, kuwaas oo noqda kalkaaliyeyaasha iyadoo lagu daro wasakhda qaarkood. Semiconductors waxay muhiimad weyn ku leeyihiin elektaroniga.
Taxane ah: habka gudbinta xogta si isdaba joog ah, taasi waa, xoogaa yar.
Sawirka Disk-ga: Barnaamijka Windows-ka ee hubiya diskka, khaladaadkana ogaado oo saxo.
0610 Adeeg: taas oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasha reer Argentine inay ku xirmaan internetka qiimo jaban oo ka hooseeya qiimaha caadiga ah, iyagoo hor dhigaya 0610 ka hor lambarka taleefanka ee bixiyahooda.
Server: kombiyuutarka dhexe ee nidaamka shabakada ee adeegyada iyo barnaamijyada siiya kombiyuutarada kale ee ku xiran. Nidaam bixiya ilo (tusaale ahaan, faylalka faylalka, magacyada magacyada). Internetka, ereygan waxaa badanaa loo adeegsadaa in lagu tilmaamo nidaamyada macluumaadka siiya adeegsadayaasha shabakadda.
Shareware: softiweer loo qaybiyay qaab tijaabo ah. Waqti cayiman kadib (guud ahaan 30 maalmood) isticmaaluhu wuxuu ikhtiyaar u leeyahay inuu iibsado.
Nidaamka hawlgalka: software ee maamusha ilaha kombiyuutarka.
Afyare: Afyare Motherboard-ka ah oo kuu oggolaanaya inaad ballaadhiso awoodda kumbuyuutarka adoo ku dhejinaya Motherboard-yada.
SMS: Adeeg Fariin Gaaban. Adeegga farriinta ee taleefannada gacanta. Kuu ogolaanayaa inaad u dirto fariin ah ilaa 160 xaraf taleefanka gacanta. Adeeggan ayaa markii hore laga hawlgeliyey Yurub. Waxaa jira dhowr degel oo aad ka diri karto SMS.
SMTP: Hab maamuuska Wareejinta Fudud. Waa borotokool caadi ah oo lagu diro emaylka.
XDS: Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka: qaab dhismeedka shabakadda ee qaab-dhismeedka guud, oo ay soo saartay IBM.
Sniffer: barnaamij kormeera oo falanqeeya taraafikada shabakadda si loo ogaado dhibaatooyinka ama dhibaatooyinka jira. Ujeeddadeedu waa in la ilaaliyo waxtarka taraafikada xogta. Laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si sharci darro ah in lagu soo qabto xogta shabakad.
Software: erey guud oo tilmaamaya noocyada kala duwan ee barnaamijyada loo adeegsado xisaabinta.
spam: email aan la weydiisan. Waxaa loo arkaa mid anshax xumo ah, maadaama qofka qaata uu bixiyo lacagta ku xirnaanta internetka.
Godka: (qaybta) isku xira korantada, godka, fur. Socket waa barta ugu dambeysa ee isku xirnaanta. Habka isgaarsiinta ee u dhexeeya barnaamijka macmiilka iyo barnaamijka server-ka ee shabakadda.
SQL: Luqad Weyn oo Habaysan. Luuqadda barnaamijka waxaa loo isticmaalay in lagu soo qaado laguna cusbooneysiiyo macluumaadka ku jira keydka macluumaadka. Waxaa la soo saaray 70s by IBM. Waxay noqotay halbeegga ISO iyo ANSI.
SSL: Lakkoobo Lakabyada Meelaha. Hab-maamuus ay u sameysay shirkadda Netscape si ay u bixiso isgaarsiin qarsoodi ah oo internetka ah.
Gudbi: Dir Laqabsashada falka Ingiriisiga «Gudbi» Isbaanish. Waxaa badanaa loo adeegsadaa horumarinta arjiga websaydhka markay tahay "gudbinta", taas oo ah, soo gudbinta xogta foomka iyada oo loo marayo HTML.
Heerka qafiifka ah: habka adeegga ay bixiyaan bixiyeyaasha internetka. Waxay ka kooban tahay bixinta qaddar go'an oo lagu galayo internetka iyada oo aan la xadidin waqtiga.
Kaarka shabakadda: Qeyb ka mid ah qalabka mas'uulka ka ah la xiriirida kombiyuutarka kombiyuutarrada kale.
Tkaarka garaafka: Qeyb ka mid ah qalabka mas'uulka ka ah soo saarista muuqaalka muuqaalka ee aan ku aragno kormeeraha.
TCP / IP: Borotokoolka Xakamaynta Wareejinta / Borotokoolka Internetka. Waa gogosha hab maamuuska TCP iyo IP ee laga isticmaalo internetka.
Tooshka Token (shabakad giraan ah): Shabakad giraan ah waa nooc ka mid ah LAN oo leh noodhadh ku xiran giraan. Noodh kastaa wuxuu si joogto ah ugu gudbiyaa farriinta kontoroolka (calaamadda) tan xigta, sidaa darteed noodh kasta oo leh "calaamo" ayaa farriin diri kara.
Topology: "Qaabka" shabakadda. Seddex nooc oo tikniyoolajiyad ah ayaa ugu badan: Bas, [[Shabakada Star topology | Star iyo Ring.
Isku-xirka Isku-xidhka: Teknolojiyada 3Com ee dhismaha shabakadaha shirkadaha waaweyn. Waxay ka kooban tahay saddex walxood oo waaweyn, waxqabadka la qiyaasi karo, gaari kara, iyo maaraynta koritaanka.
Transistor: Qeybta elektarooniga ah ee calaamadeysa kahor iyo kadib taariikhda korantada iyo xisaabinta. Marka la eego shuruudaha dadka waa wax sida 'tubbada elektarooniga ah ee la hagaajin karo'.
Trojan (Trojan horse; Trojan horse): waa barnaamij kombiyuutarku helo, si qarsoodi ah, oo umuuqda mid aan dhib lahayn oo ujeedodiisu badanaa tahay qabashada furaha sirta ah iyo furaha furaha si loogu oggolaado weerarka dambe ee mashiinka.
Tux: Xanuunada Mascot ee nidaamka hawlgalka GNU / Linux.
Unix: Nidaam badan oo adeegsadeyaal ah iyo adeegyo fara badan, waxay aad muhiim ugu ahayd horumarinta internetka, maanta noocyadeeda la hagaajiyay ayaa wali la isticmaalaa, sida Linux, BSD, Solaris ama AIX.
USB (Universal Serial Bus): waa iskuxirid & ciyaar ciyaar kumbuyuutar iyo aalado gaar ah, tusaale ahaan, teebabka, taleefannada, iskaanka iyo madbacadaha. Wikipedia
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Qaamuuska Kumbuyuutarka (STU)
Sidee loo isticmaalaa jelka timaha?
WaveBox: microwave la qaadan karo oo wax ku ool ah